सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल्सको भेटघाट कार्यक्रम
सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि. र लक्ष्मी स्टिल्स प्रा.लि.ले नारायणघाट र टाँडी पर्सामा सम्पन्न भएको छ । गत बिहीबार र शुक्रबार नारायणघाट र टाँडीलाई केन्द्रित गरी सो क्षेत्रमा भवन निर्माणकार्यमा संलग्न सिनियर प्राविधिक (ठेकेदार)हरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा घर बनाउँदा सिमेन्ट र डण्डीको प्रयोग प्राविधिक रुपमा कसरी गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने र सिमेन्टको प्रयोग प्राविधक रुपमा उपयुक्त तरिकाले कसरी गर्दा सिमेन्टको खपत पनि कम हुन जान्छ भन्नेबारे जानकारी गराइएको थियो । उक्त भेलामा नारायणघाटमा एक सय ७५ जना र टाँडी तथा पर्सामा एक सय ५८ जना ठेकेदारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अत्याधुनिक युरोपियन भी.आर.एम. प्रविधिद्वारा सिमेन्ट उत्पादन गर्नेे सिमेन्ट उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि.ले ग्रिन सर्वाेत्तम ओपीसी र श्री ग्रिन पी.एस.सी. नामक ब्राण्डका सिमेन्टहरु नेपालभर सर्वत्र बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । यस उद्योगद्वारा उत्पादित यस सिमेन्टको मसिनोपन प्रतिग्राम चार हजार पाँच सय वर्ग से.मि.सम्म रहेको कम्पनीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि. क्रसबार कुलर इन्टेलिजेन्ट मेसिन कन्ट्रोलको प्रयोग गरी सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरुपता प्रदान गर्ने नेपालको एक मात्र सिमेन्ट उद्योग रहेको कम्पनीको दाबी छ । आफ्नै इस्टिम इन्जिनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरुपता प्रदान गर्न एक्सरे डिफ्राक्सनबाट परीक्षण हुने यस उद्योग नेपालकै एक मात्र सिमेन्ट उद्योगको रुपमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको मध्यभाग नवलपरासीमा अवस्थित यस सर्वोत्तम समेन्ट प्रा.लि.ले नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट खानी पाल्पा तथा चितवनको चुनढुङ्गा मिश्रणबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यस सिमेन्ट उद्योेगको उत्पादन क्षमता ४० हजार बोरा प्रतिदिन रहेको र आउने समयमा ६० हजार बोरासम्मको क्षमता बढाउने टार्गेट रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याई उत्पादन गर्न सक्षम यस सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि. आईएसओ ९००१ गुणस्तर प्रमाणित, १४००१ वातावरणमैत्री प्रमाणित र नेपाल गुणस्तर प्रमाणित समेत भएको कम्पनीका ब्राण्ड मेनेजर गोपाल सारडाले जानकारी दिए ।